Idlib: Martin Vrijland
Ụmụaka anaghị egbu gas na-egbu egbu, ma ọ bụ ndị uweojii na-acha ọcha na NATO?
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 10 April 2017	• 24 Comments
Dị ka otu dọkịta sitere na Swedish nzukọ Swedish Doctors For Rights Rights (SWEDHR), ụmụaka ndị White Helmets dọkịta (NATO) napụtara site na njedebe gas na-egbu n'ezie na ha na anya nke igwefoto. Nke ahụ bụ nnọọ nkwupụta! Otú ọ dị, nkwupụta ahụ sitere n'ọnụ onye dọkịta dị ike [...]
Na tomahawk agha na Syria dabeere na ụgha ọkọlọtọ sarin gas agha?
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 10 April 2017	• 22 Comments
N'izu gara aga, ụwa dara mbà site na ọrụ nchịkwa US President Trump gosipụtara na njedebe gas nke ndị agha Siria na-emegide ndị ya nọ n'ógbè Idlib. Ebe n'okpuru ebe nchekwa 1 dị na Balkenende na 2003 na Dutch nọ na-akwado nkwado Bush na Blair na Iraq na [...]
Nleta nile: 13.074.474
guppy op Ndị 'mmụọ ezinụlọ' PsyOp (arụmọrụ nke mmụọ): na-ewepụ nnwere onwe gị ma na-ewebata 'ndị uwe ojii'
SalmonInClick op Ndị 'mmụọ ezinụlọ' PsyOp (arụmọrụ nke mmụọ): na-ewepụ nnwere onwe gị ma na-ewebata 'ndị uwe ojii'
Martin Vrijland op Ndị 'mmụọ ezinụlọ' PsyOp (arụmọrụ nke mmụọ): na-ewepụ nnwere onwe gị ma na-ewebata 'ndị uwe ojii'
Jikọọ ndị 1.649 ndị ọzọ debanyere aha